China Cell Direct RT qPCR Kit—SYBR GREEN I Onye nrụpụta na onye na-ebubata |Mbido
Ngwa Cell Direct RT qPCR — SYBR GREEN I
◮ Dị mfe ma dị irè: site na teknụzụ Cell Direct RT, enwere ike nweta ihe nlele RNA n'ime naanị nkeji 7.
◮Ọchịchọ nlele dị ntakịrị, ebe ọ bụ na enwere ike ịnwale mkpụrụ ndụ 10.
◮ Ntinye ego dị elu: ọ nwere ike ịchọpụta RNA ngwa ngwa n'ime mkpụrụ ndụ emebere na 384, 96, 24, 12, 6-well plates.
◮Nchicha DNA nwere ike wepu ngwa ngwa genomes ewepụtara, belata mmetụta na nsonaazụ nnwale na-esote.
◮Usoro RT na qPCR kachasị mma na-eme ka ntụgharị ntụgharị RT-PCR nzọụkwụ abụọ rụọ ọrụ nke ọma yana PCR akọwapụtara nke ọma, yana na-eguzogide ndị na-egbochi mmeghachi omume RT-qPCR.
Ngwa a na-eji sistemu nchekwa lysis pụrụ iche nke nwere ike hapụ RNA ngwa ngwa site na nlele cell emebere maka mmeghachi omume RT-qPCR, si otú a na-ewepụ usoro ịdị ọcha nke RNA na-ewe ma na-arụsi ọrụ ike.Enwere ike nweta ndebiri RNA n'ime naanị nkeji 7.Nke 5×Direct RT Mix na 2×Direct qPCR Mix-SYBR reagents nke ngwa ahụ na-enye nwere ike nweta nsonaazụ PCR ozugbo na nke ọma.
5×Direct RT Mix na 2×Direct qPCR Mix-SYBR nwere nnabata inhibitor siri ike, enwere ike iji lysate nke ihe nlele ahụ dị ka ndebiri maka RT-qPCR ozugbo.Ngwa a nwere RNA pụrụ iche Foregene reverse transcriptase, yana Hot D-Taq DNA polymerase, dNTPs, MgCl.2, ihe nchekwa mmeghachi omume, PCR optimizer na stabilizer.
Ihe nchekwa CL
Ihe nchekwa ST
Ngwakọta 5 × Direct RT Mix
50× ROX ntụaka agbaji
ddH2O na-efu RNase
■Dị mfe ma dị irè: site na teknụzụ Cell Direct RT, enwere ike nweta ihe nlele RNA n'ime naanị nkeji 7.
■ Ọchịchọ nlele dị ntakịrị, ebe ọ bụ na enwere ike ịnwale mkpụrụ ndụ 10.
∎ Mgbakwunye dị elu: ọ nwere ike ịchọpụta RNA ngwa ngwa n'ime sel ndị emebere na 384, 96, 24, 12, 6-well plates.
∎ DNA Eraser nwere ike wepụ ngwa ngwa genomes ewepụtara, belata mmetụta dị na nsonaazụ nnwale na-esote.
∎ Sistemu RT na qPCR emeziri na-eme ka ntụgharị ntụgharị RT-PCR nzọụkwụ abụọ rụọ ọrụ nke ọma yana PCR akọwapụtara nke ọma, yana na-eguzogide ndị na-egbochi mmeghachi omume RT-qPCR.
Oke ngwa: mkpụrụ ndụ omenala.
- RNA wepụtara site na nlele lysis: naanị ọdabara na ndebiri RT-qPCR nke ngwa a.
- Enwere ike iji ngwa ahụ maka ebumnuche ndị a: nyocha okwu mkpụrụ ndụ ihe nketa, nkwenye nke mmetụta ịgbachitere mkpụrụ ndụ ihe nke siRNA, nyocha ọgwụ, wdg.
Nchekwa na Shelf ndụ
A ga-echekwa akụkụ nke mbụ nke ngwa a na 4 ℃;Ekwesịrị ịchekwa akụkụ II na -20 ℃.
Ekwesịrị ịchekwa Foregene Protease Plus II na 4℃, atụla oyi na -20 ℃.
Reagent 2×Ekwesịrị ịchekwa Direct qPCR Mix-SYBR na -20℃n'ime ọchịchịrị;ọ bụrụ na a na-ejikarị ya eme ihe, a pụkwara ịchekwa ya na 4℃ maka nchekwa obere oge (jiri elu n'ime ụbọchị 10).
Nke gara aga: Lnc-RT Heroᵀᴹ I (ya na gDNase) (Super Premix maka njikọ cDNA nke mbụ sitere na lncRNA)
Osote: Ezigbo oge PCR Easyᵀᴹ-Taqman
Nyocha biotech cell
Cell nlereanya nkwado maka ọgwụ, Animal nlereanya nkwado maka ọgwụ
Selụ na-eduzi ngwa ngwa Qrt PC
PCR mouse cell na otu nzọụkwụ
Ngwa nhicha ọcha
Real Time PCR primer ụkpụrụ imewe
Na-aga n'ihu Primer na Reverse Primer
Maka Real Time PCR, imewe primer dị ezigbo mkpa.Primers metụtara nkọwapụta na arụmọrụ nke nkwalite PCR, enwere ike hazie ya na ntụnyere ụkpụrụ ndị a:
Ogologo oge mbụ: 18-30bp.
Ọdịnaya GC: 40-60%.
Uru Tm: Akụrụngwa imewe nke mbụ, dị ka Primer 5, nwere ike inye uru Tm nke primer.Ụkpụrụ Tm nke ndị na-ebuli elu na nke mgbada kwesịrị ịdị nso dịka o kwere mee.A nwekwara ike iji usoro mgbako Tm: Tm = 4 °C (G + C) + 2 Celsius C (A + T).Mgbe ị na-arụ PCR, a na-ahọrọ ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru primer Tm uru nke 5 Celsius ka ọ bụrụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ (mmụba kwekọrọ na okpomọkụ nke nkwụsịtụ nwere ike ime ka mmeghachi omume PCR pụta ìhè).
Ngwaahịa mbụ na PCR:
Nhazi primer PCR ogologo ngwaahịa nkwalite bụ ọkachamma 100-150bp.
Ekwesịrị ịzere primers imewe na mpaghara nhazi nke abụọ nke ndebiri dị ka o kwere mee.
Zenarị nhazi ntọala 2 ma ọ bụ karịa n'etiti nsọtụ 3 nke elu na mgbada ala.
Primer 3′ ọdụ ọdụ enweghị ike ịnọ na 3 mgbakwunye G ma ọ bụ C.
Ndị primers n'onwe ha enweghị ike ịnwe ihe mgbakwunye, ma ọ bụghị ya, a ga-emepụta nhazi ntutu isi, na-emetụta mmụba PCR.
Ekwesịrị kesaa ATCG n'otu n'otu dịka o kwere mee n'usoro nke mbụ, yana 3′ ọdụ ọdụ kwesịrị izere ka T.
Ihe mgbakwunye 1: Mkpọ mgbakwunye akụrụngwa Direct RT-qPCR Kit
(24-well lysis sistem / ọma)
(Sistemụ mmeghachi omume 20 μl)
ddH na-efu RNase2O
Ngwa Cell Direct RT qPCR — Taqman